सेतो पोशाकमा मध्यरातकी सुन्दरी ! - inaruwaonline.com
सेतो पोशाकमा मध्यरातकी सुन्दरी !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ०८, २०७२ समय: १६:४७:१२
जमुना वर्षा शर्मा अंकल ! यो गाडीमा चुरा र धागो किन झुण्डाउनु भएको ? तीजको समयमा मुस्किलले क्याविनमा सिट पाएकी छोरी प्राप्तिले बस चालकलाई सोधिन् । चालकले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए ‘राति हिँड्दा राम्री महिलाले सताउँदिनन् भनेर ।’ १० वर्षीया छोरीको मन के शान्त हुन्थ्यो । उनले थप जिज्ञासु हुँदै फेरी सोधिन् ‘राम्री महिला भन्नाले ?’ ड्राइभरले भने ‘किच्कन्नी’ जो अति राम्री हुन्छिन्, तर व्यवहार डरलाग्दो हुन्छ ।’
हजुरले देख्नु भएको छ उनी निकै आश्चर्य भावमा प्रस्तुत भइन् । ड्राइभरले देखेको संकेत गर्दै टाउको हल्लाए । प्राप्ति थप जिज्ञासु हुँदै प्रश्न गर्दै थिइन् तर, मैले छोरीलाई बढी नबोल्न संकेत गरें । गाडी चलाइरहेका चालक त्यसमाथि यात्रुले खचाखच भएको बस घुम्ति र दोहोरो गाडीको रफ्तार बेला । चालकलाई विविध प्रश्न गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै, मैले छोरीलाई रोकें । ‘तिमीले बुझ्दिनौ यस्ता कुरा’ उनलाई जबरजस्ति शान्त पार्दै हातमा चाउचाउ थमाइदिएँ । निधार खुम्च्याउँदै छोरी चुप लागिन् । वास्तवमा छोरीले सोधेको प्रश्न र चालकको उत्तरले मलाई पनि जिज्ञासु बनायो । सोच्न र कल्पना गर्न थाले मध्यरातकी सुन्दरीका बारेमा । ‘राम्री महिला’ जसले पुरुषको सातो लिन्छे । आजसम्म राम्री महिलासँग पुरुष डराएको मैले सुनेकी छैन, त्यो पनि सातो जाने गरी । तर ‘ति महिला जो राम्री भएर पनि पुरुषलाई तर्साउँछिन्, त्यो पनि मध्यरातमा’ ति को हुन् ?
महिला भएको नाताले कता कता गर्व गर्न मन लाग्यो, मध्यरातमा अप्रत्याशित उपस्थितीले आफूलाई बेजोड शक्तिशाली ठान्ने पुरुषको सातो लिएर आफ्नो अजंगको शक्ति प्रर्दशन गरेकोमा । भेटेर दिन मिल्ने भए साँच्चै अंगालोमै हालेर बधाई दिन्थे होला । तर, मेरा लागि यो एउटा पत्याउन नसक्ने बिषय थियो । अधिकांश सार्वजनिक र प्राइभेट गाडीमा चुरा, धागो, पोते झुण्डाएको हामी सबैले देखेका छौँ । रात्रीकालिन सवारी साधनमा त अनिवार्य जस्तै राखिएको हुन्छ ।
यसलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । यसो किन गरेको भनियो भने आउने उत्तर भनेको ‘किच्कन्नी’ बाट बच्न भन्ने पाइन्छ । कतिले वाहियात, बकम्फुसे भन्लान त कतिले हो भन्दै टाउको हल्लाउलान पनि । को हो किच्कन्नी र कस्ता हुन्छन् भनेर बुझ्न खोज्यो भने रात्रीकालिन गाडी चलाउने केही चालकले लामो व्याख्या समेत गर्ने गर्छन् । कहिलेकाही प्रसंग उठाउँदा धेरैजसो ड्राइभरहरूले किच्कन्याको हुलिया पनि दिने गरेका छन् ।
‘अग्ली सेतो पहिरन लगाएकी, लामो कपाल भएकी, खुट्टा उल्टो भएकी’ आदि आदि । मध्यरातमा गाडी रोकेको, लिफ्ट मागेको र केही पर गएपछि विलिन भएको घटना बडो गजबले सुन्न पाइन्छ । विभिन्न साइनो र आफन्तको नाम पुकारेर बोलाएको पनि भन्न भ्याउँछन् चालकहरू । विश्वस्त हुने आधार र चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म यसलाई पत्याउन जरुरी छैन । यद्यपी रातको समय कहि कतै एक्लै जाँदा ‘भुत प्रेत र किच्कन्या’ बाट मात्रै होइन कि जिउँदो मान्छेबाट डराउनु पर्ने अवस्था नै अझै हटिसकेको छैन । प्राइभेट गाडीको गेयरमा चुरा राखेका एक जना गाडी मालिकको तर्क केहि फरक पाइयो । एकसुरमा गाडी चलाइरहँदा गियर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा विर्सियोे भने गाडी थर थर गर्छ अनि चुरा बढी बज्छ । यसले गेयर चेन्ज गर्ने याद दिलाउँछ । कहिलेकाँही निदाउन लागेको अवस्थामा पनि चुराको आवाजले झसंग गराउँछ । यसर्थ आफूले गाडीमा चुरा राखेको उनको तर्क थियो ।
कहि कतै छोरी एक्लै हिड्न थाले आफू भन्दा १० वर्ष कान्छो नै भए पनि भाइको साथ पठाएर सुरक्षित ठान्ने समाजमा पनि केही पुरुष राती ‘राम्री महिला’ देख्दा डराउँदा रहेछन् । गजबै लाग्यो । पुरुषलाई कमजोर र अपमान अथवा उसको नालायकी प्रस्तुत गर्नका लागि सामाजिक संजाललगायतका माध्यमहरूमा चुरा पोते साडी पहिराइदिएर मजाक गरिरहेका दृश्य हाम्रा लागि सामान्य लाग्छन् । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका विरोधमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यस्तै पहिरहनबाट नालायक सावित गर्न खोजियो । नेपालका पनि मधेशवादी दलका नेताका तस्विरमा महिलाका पहिरन पहिराएर नालायक प्रमाणित गर्न खोजियो । राजनीतिक घटनाक्रम होस् वा सामाजिक बहिष्कारको बिषय, कसैको घोर अपमान गर्नु छ चरम आक्रोश पोख्नु छ भने महिलाका पहिरनमा सजाइन्छ ।
यस्ता हर्कत गरेर महिलालाई कमजोर सावित गर्न आजपर्यन्त हाम्रो समाज क्रियाशील छ । महिलाको सुन्दरता र सौभाग्यसँग जोडिएका चुरा टिका पोते जस्ता साधनलाई नालायक र अक्षम देखाउन व्यग्यांत्मक प्रयोगमा ल्याउनेहरूले मध्यरातको डर भगाउन फेरी यसैको सहारा लिने गरेको देख्दा र सुन्दा मान्छेको विवेक र बुद्धिले कसरी काम गर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ । यसर्थ पनि यो समाजमा मध्यरातकी शक्तिशाली सुन्दर युवतीको कहानी बास्तवमै गजब र रोचकको छ । अब मध्यरातमा कहिँ कतै जान परे सेतो पहिरन, लामो कपाल सहित हिँडे पक्कै पनि सुरक्षित भइन्छ कि ? लामो कपाल, सेतो पहिरनमा सजिएकी ‘किचकन्या’ बाट जोगिन पुरुष गाडीमा चुरा पोते बाँधेर बोकेर हिड्छन् ।जबकी अरु बेला कुनै पुरुषलाई सार्वजनिक रुपमा अपमानित गर्नुपर्यो भने त्यहि चुरा पोते लगाइ दिने वा उपहार पठाइदिने गर्छन । कस्तो बिडम्बना ? (लेखक सञ्चारिका समूह पश्चिमाञ्चलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।) महिलाखबर बाट